WLDH Horizontal iribhoni Umxhubi - China Changzhou Daming Pharmaceutical Equipment
Principle Working Lo matshini ubunjwe isikhongozeli, ujije emanzini ibangele kunye nezahlulo otshintsho; i nesimbo Screw zona ngokubanzi enza umaleko 1 okanye maleko 3, jija isikhonkwane yangaphandle livuma na imathiriyeli iziko evela kumacala amabini, kwaye umaleko engaphakathi Screw idlulisela izinto emacaleni omabini ukusuka kwiziko, ukuze ukususela පිළිතුරු iimpendulo ukuxuba . Iimpawu lomlingani Big of iyalayisha, indawo encinane ezinabantu. Kunzima ukucoca xa isetyenziswa ukuxuba izinto viscous okanye iglu. ...
Lo matshini ubunjwe isikhongozeli, ujije emanzini ibangele kunye nezahlulo otshintsho; i nesimbo Screw zona ngokubanzi enza umaleko 1 okanye maleko 3, jija isikhonkwane yangaphandle livuma na imathiriyeli iziko evela kumacala amabini, kwaye umaleko engaphakathi Screw idlulisela izinto emacaleni omabini ukusuka kwiziko, ukuze ukususela පිළිතුරු iimpendulo ukuxuba .
lomlingani Big of iyalayisha, indawo encinane ezinabantu.
Kunzima ukucoca xa isetyenziswa ukuxuba izinto viscous okanye iglu.
Material ukuba kuxutywe
Le sokuxuba iribhoni isetyenziswa ukuxuba izinto viscous okanye enamathelayo powder, okanye elisetyenziswa powder ekufuneka ukongeza elulwelo, kunye nezinto paste. Okwangoku, ngokuba kunzima ukucoca izinto viscous, umatshini ngokufanelekileyo kwimeko ukuxubana, apho imveliso mkhulu yaye akukho mfuneko yokuba kancinane ezahlukeneyo izinto rhoqo.
mixed mali / inyanda
Qaphela: Le mveliso olukhankanywe apha ngasentla yenziwe C intsimbi carbon okanye steel stainless P
Previous: SYH Series abathathu D Umxhubi
Next: VHJ series lokuxhuba
uBlade Ukuxuba Machine
isichumiso ukuxuba Machine
High ezisebenzayo Pharmaceutical Ukuxuba Machine
Laboratory irabha ukuxuba Machine
Umxhubi / ukuxubana eziNcedisayo Engine
yerabha Machine Ukuxuba
Izindululo ezintathu D Sokuxuba
emkhumbini Type Umxhubi
emkhumbini Type Ukuxuba Machine
Wldh Series Horizontal iribhoni Umxhubi
VHJ series lokuxhuba
HJ Series wokuxova cone kabini